App Outlet: Dukaan guud oo loogu talagalay codsiyada GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
App-ka soo baxa waa codsi xiiso leh oo noo ogolaanaya in aan dhex dhexaadino deegaan ka mid ah Bakhaarka internetka codsiyada kala duwan oo waxtar u leh kuweenna Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, oo ku saleysan qaababka baakadaha cusub iyo kuwa kala duwan (Flatpak, Snap iyo Appimage) la heli karo
Sidaa darteed App-ka soo baxa Tan iyo markii la abuuray waxaa loo qaabeeyey sidii dukaan codsi oo ay dhiirrigelisay adeeggii hore ee khadka tooska ahaa ee Dukaanka Linux (https://linuxappstore.io/) taasi hadda ma shaqeyso. Intaas waxaa sii dheer, is dhexgalka fudud iyo saaxiibtinimada leh ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u raadiso, u soo dejiso oo aad u rakibto codsiyada ku shaqeeya inta badan qaybinta GNU / Linux.
App-ka soo baxa waa codsi weyn oo noo oggolaanaya hadda, si looga fogaado booqashada iyo / ama adeegsiga Bakhaarada Webka ee barnaamijyada internetka, sida:
Iyo kuwa kale oo la yaqaan, oo aad ugu eg:
Taasi waxay ku shaqeysaa iyada oo lagu rakibayo codsiyada kala duwan ama ku darista arjiga OCS-Url. Mar dambe ayaan ka hadli doonaa dukaamadan kale oo waxaan ku niri arjiga OCS-Url.
1 App Outlet: Dukaan guud oo loogu talagalay barnaamijyada
App Outlet: Dukaan guud oo loogu talagalay barnaamijyada
Si aad u soo dejiso App-ka soo baxa waa inaan tagno tiisa degel rasmi ah oo ku soo dejiso qaabka aan doorbidno ama u baahan nahay. Xilligan waxaa lagu heli karaa qaababka rakibaadda soo socda:
.muuqal (68.2 MB)
.snap (Lama heli karo)
Daraasadeena kiiska, waxaan kala soo bixi doonnaa xirmada .deb qaab loogu rakibo boosteejada.
Marka xirmada lagala soo baxo .deb qaab waxaan sii wadaynaa inaan ku rakibno adoo isticmaalaya amar "dpkg", sida soo socota:
Marka la rakibo, waa la fulin karaa iyadoo la adeegsanayo toobiye lagu abuuray qaybta menu “Qalabka”. Ama laga bilaabo terminalka adoo ordaya kan amar "app-outlet". Haddii ay dhacdo in aan lagu fulinin habka ugu horreeya, waxaa loo samayn karaa habka labaad si loo arko nooca khaladka uu terminalku ina tusayo.
Haa adoo adeegsanaya amarka soo socda:
Farriinta khaladka ayaa la soo bandhigay:
Isku day inaad socodsiiso amarrada soo socda:
Ka dibna dib u dhig amarka degdegga ah:
Haddii si sax ah looga fuliyo terminalka, sidoo kale si sax ah ayaa looga fulin doonaa liiska. Khadka taliska sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 waa in had iyo jeer la dilaa kahor intaan la fulinin, in barnaamij mooyee a qoraal ama hawl qorsheysan bilowga (bilowga) ee Nidaamka hawlgalka.
Markii la dilo oo la bilaabo dhibaato la'aan App-ka soo baxa wuxuu na tusayaa daaqad ay ku jiraan qodobbada soo socda:
Baarka raadinta: Si aad u hesho codsiyo diiwaangashan adoo u dhigma qaabka raadinta oo leh magaceeda ama sharaxaaddeeda.
Liiska: Waxay leedahay 4 ikhtiyaar oo kala ah Hoyga, Qaybaha, Dejinta iyo Ka Qaybgal.
Gudiga codsiyada: Taasi waxay muujineysaa 3 sadar oo loo yaqaan barnaamijyada caanka ah (barnaamijyada caanka ah), Dhawaan la cusbooneysiiyay (Dhawaan la cusbooneysiiyay) iyo sii-deynta cusub (sii-deynta cusub).
Marka la soo koobo, gudaha App-ka soo baxa waxay na siisaa noocyo badan oo codsiyo ah oo aan ku ogaanno, rakibno oo aan tijaabino
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan codsigan xiisaha leh ee loo yaqaan «App Outlet», taas oo noo ogolaaneysa in aan dhex dhexaadino deegaan ka mid ah Bakhaarka internetka codsiyada kala duwan oo waxtar u leh kuweenna «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» iyada oo ku saleysan qaababka baakadaha cusub iyo kuwa kala duwan (Flatpak, Snap iyo Appimage) la heli karo; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » App Outlet: Dukaan guud oo loogu talagalay codsiyada GNU / Linux
Waad salaaman tihiin, xiisihii dhowaa ee aan isku dayay inaan ku tijaabiyo arjiga appimage
oo waxaan helay qalad la mid ah midka aad sheegatay aakhirkiina waxaan u gudbay inaan tijaabiyo, ma aanan bilaabin inaan baarto sida mushkiladdaas loo xaliyo.
Khaladkan maxaa keenay? Waxaan u arkaa bummer inay tahay inaan sameeyo taas si aan u socodsiino arjiga. Si kale looma xallin karo?
Salaan Jony127! Isku day inaad socodsiiso tan ama codsi kale "/ opt / App Outlet / app-outlet" –no-sandbox% U oo laga soo gaabiyo dariiqa ama boosteejada. Ikhtiyaarka –no-sandbox wuxuu iska ilaaliyaa inuu marka hore maamulo amarka sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1
Haa, ikhtiyaarkaas ayaan ku fulin karaa aniga oo aan isticmaalin mid ka mid ah amarradii hore, su'aashaydu waxay tahay, tani wax ma u dhimi kartaa amniga nidaamka? Waan fahamsanahay in amarkaas dalabku socdo iyadoo aan la isticmaalin ilaalinta sanduuqa.
Xaqiiqdii, haddii aad ka wado meel ka baxsan Sanduuqa Sandbox mid ayaa ku dhici kara weerar, inkasta oo aan u maleynayo in isticmaalaha caadiga ah iyo gaar ahaan isticmaalaha GNU / Linux, waa suurtagal aad u yar, in kasta oo ay macquul tahay. Inta soo hartay, waan sii wadi doonaa baaritaanka sababta iyo xalka.
Salaan Jony127! Hadaad ula jeedo khaladka lagu xaliyay xariiqan amarka:
Ka dib markaan si sax ah u baaray waxa saxo ama sida aan otomaatig ahaan ugu shaqeysto, runta ayaa ah inaanan ogaan karin tan ugu horeysa wax walbana oo aan isku dayay kan labaadna uusan waxtar lahayn. Wax kasta, aan rajeyno in akhriste kale uu noo keeno wax yar oo tan ah.